Ingabe Amazwana Ukuguqulwa Okulinganayo? | Martech Zone
Ingabe Amazwana Ukuguqulwa Okulinganayo?
NgoLwesibili, Okthoba 14, 2008 NgoLwesine, ngo-Okthoba 3, 2019 Douglas Karr
Ngihlaziye i-blog yami kule mpelasonto ukubheka ukuhlangana phakathi kwemiphumela yami yenjini yokusesha, okuthunyelwe kwami ​​kwebhulogi okuthandwa kakhulu, okuthunyelwe okunamazwana amaningi, nokuthunyelwe okuholele empeleni emalini engenayo ngenxa yokubonisana noma ukukhuluma.
Ukubukeza engikuthumele okuthandwa kakhulu, uzothola ifomu lokuxhumana leWordPress, iHuntington Bank Sucks, ngishiye iBasecamp, nobude bekheli le-imeyili liphethe ithrafikhi enkulu. Lokho okuthunyelwe kuhola indlela yemiphumela ye-Search Engine. Lokho okuthunyelwe nakho kunamazwana amaningi. Kodwa-ke, lokho okuthunyelwe kunikeze kuphela ama-dollar amancane (nezinkomishi ezimbalwa zekhofi) ephaketheni lami.
I-IMHO, ukusebenzisa imibono njengesilinganiso sodwa sempumelelo kujwayelekile, kepha kuholela kufayela le- iningi lamabhulogi ezinkampani liyahluleka.
Cishe i-1 kuzo zonke izivakashi ze-200 iza kubhulogi yami futhi ishiya amazwana. Amaphesenti amancane alabo aba-snarky, iningi ngabantu enginobudlelwano nabo… futhi bambalwa kakhulu, uma bakhona, enginabo ibhizinisi. Eqinisweni, enye yezinkontileka zami ezinkulu kunazo zonke kulo nyaka odlule ibivela kokuthunyelwe okukhombise ubuchule bami kwezobuchwepheshe obuthile (futhi kwabekwa kahle), kepha angabinakho ukuphawula nakancane.
Inkinga akuyona ukubhuloga, kunjalo. Nginokufunda okuningi kubhulogi lami - kepha anginakho ukuqhubeka kokuhlala ngibhala okuqukethwe ngezihloko ezishintsha ukuguqulwa kimi. Futhi, anginalo ucingo lwezenzo kubha yami eseceleni.
Bengihlala ngilinganisela impumelelo yami ngenani lababhalisile be-RSS nokuzibandakanya (ngamazwana kubhulogi lami). Ngicabanga kabusha lelo qhinga! Uma ngifisa ukushayela imali engenayo futhi ngisebenzise lokhu njengebhulogi lebhizinisi, ngidinga ukukhomba okuqukethwe kwami ​​ukuze ngiphumelele ekufuneni ngokwemigomo efanele lokho okuhola imali engenayo. Ngidinga nokuhlinzeka nge- indlela esizeni sami ukubamba nokukala lokho kuguqulwa.
Angikholwa ukuthi ukuphawula ukuguqulwa okulinganayo, futhi akufanele kube yisilinganiso sempumelelo yebhulogi yakho.
Ngaphandle kokuthi ngandlela thile ungaqondanisa umsebenzi nomphumela webhizinisi, kumane kuyimethrikhi eyize. Lokho akusho ukuthi angifuni ukuphawula… ukuthi nje angizukusebenzisa imibono njengesibonisi sendlela esebenza ngayo ibhulogi yami.
Tags: ezokuxhumana ezithuthukileUkuphumelelaUMichael Stelznerizinkokhelo zeselulaisivinini sekhasizikhiphe ohlwiniwikiality
Wina i-Wii evela kuNoobie!
Ochwepheshe Bemidiya Yezenhlalo egcekeni lakho!
I-Oct 14, i-2008 ku-2: i-25 PM
Ngifuna ukuba ngowokuqala ukuphawula ngokungabalulekanga kokuphawula. Okuthunyelwe okuhle!
I-Oct 14, i-2008 ku-4: i-40 PM
Ngiyavuma ukuthi imibono akuyona ukuphela kwendlela yokuphumelela.
Kukhona ithuba elikhulu lokuthuthukisa umkhiqizo ngokubhuloga. Siyinkampani yokwakha neyokwakha egxile emasontweni. Sihlukanisa ngokuthuthukisa ulwazi nokuqonda okuningi ngamakhasimende esonto kunalokho abanakho. Ibhulogi yethu isivumela ukuthi sikhombise lolo lwazi futhi sihlanganyele amaqembu obuholi besonto ezingxoxweni ezinethemba lokuthi zibahlomisela kangcono inkonzo. Amabhulogi ethu asebenza njengengxenye yecebo lethu lokwenza lokho ngamandla amakhulu.
Isikhathi sizoveza inani eligcwele.